I-Furfural Chemical Compound
I-Furfural chemical compound Furfural (C4H3O-CHO), ebizwa nangokuthi i-2-furaldehyde, ilungu elaziwa kakhulu lomndeni we-furan nomthombo wamanye ama-furan abalulekile kwezobuchwepheshe. Kunguketshezi olungenambala (iphuzu elibilayo 161.7 ° C; amandla adonsela phansi 1.1598) ...
Kuyini Ukuthungwa? I-KC BRUNING I-Furfural iyikhemikhali elenziwe ngezinto eziphilayo ezikhiqizwa izinhloso zezimboni. Ngokuyinhloko yakhiwe yimikhiqizo yezolimo efana namakhoba e-oat, i-bran, ama-corncob, ne-sawdust. Ezinye ze-p ...
I-Bagasse Plant Fiber
I-Abstract Melanoma ibanga kuphela u-4% wawo wonke umdlavuza wesikhumba kepha iphakathi kwezimila ezinqamulelayo ezibulala kakhulu. IDacarbazine yisidakamizwa esithandwayo ekwelapheni i-melanoma eBrazil ngohlelo lwezempilo lomphakathi ikakhulu ngenxa yezindleko zayo eziphansi. Noma kunjalo, kuyi-alkyl ...